တူညီသော Outfits ကို မတူညီသော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဝတ်ဆင်သောအခါ
Denise Mercedes နှင့် Maria Castellanos တို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားတွေရှိပေမယ့် နှစ်ဦးစလုံးကတော့ အကြွင်းမဲ့လှပပြီး ချစ်စရာကောင်းကြသူတွေပါ။ ဒီကနေ့မှာ ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ဝသူနှင့် ပိန်သွယ်သူတို့ရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ fashion အသွင်အပြင်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ စတိုင်လ်ဆိုတာ အရွယ်အစားနဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်း သက်သေပြသွားတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ကိုယ်တတ်နိုင်တာတွေရော၊ မတတ်နိုင်တာတွေရော အားလုံးအတွက် အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ဖန်တီးတီထွင်သူတွေက တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေ အမျိုးသမီးတွေအားလုံး လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းတွေကိုလည်း ရွတ်ပြနေပါတယ်။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဒီလိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဆွဲကိုင်ထားကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတွေကတော့ ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းချိုးဖောက်နေကြပါပြီ။ ၁။ ဖက်ရှင်ကျပြီး...
အသက် (၂၀) နှင့် (၂၅) နှစ်အကြား မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖက်ရှင်ကို ဘယ်လိုအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ရွေးချယ်ရမလဲ?
သင့်ရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက်ဝတ်ဆင်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် သင့်ရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေစေဖို့အတွက်တော့ သင့်ရဲ့ ဗီရိုထဲမှာ သင့်တင့်တဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အသက် (၂၀) နှင့် (၂၅)...
သင့်ရဲ့မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ခြင်းဖြင့် Bangs ပုံစံလေးတွေနဲ့ လိုက်/မလိုက်ဆိုတာ သိစေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ချက်
ကိုယ်က ကိုရီးယားမလေးတွေလို Bangs ပုံစံလေးတွေညှပ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အလှပြင်ဆိုင်ရောက်ရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံကိုပြောဖို့ သတ္တိမရှိဘူးဖြစ်နေပါသလား? အထူးသဖြင့် အမြဲတမ်း ဆံပင်အပြောင်သိမ်းပြီးနေတဲ့သူတွေအတွက် ရှေ့ဆံမြိတ်ချတာက ကိုယ့်ရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တာကြောင့် အရဲမစွန့်ရဲဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Bangs...